World News – Page2– Chin World News
Zeiruangah Dah Mi Tamp Deuh Nih C. Ronaldo Hi Messi Nak In An Uar Deuh?
Ronaldo hi cu Footballer hmanh rak si hlahseh lawanih hi cuamui hrimhrim hi aa dawh tuk ialar hrimhrim ko lai, Mui nih le dawh Bawlung chuih nih le thiam…
Ka Nuam Tuk Nain Ka Darling Chiatha Nih Phundang In Rian A Tuan Ka Lautuk
Vawlei cung minung hi kan ruahnakarak i dang lengluang,Minung tam deuh nih cun thil kan cawk hlanah kan hneksak ta hmasa lengmang. Asinain minung cheukhat cu hneksaknak zeihmanh tuah hmasa loin direct bak…
World News December 23, 2018
အမေရိကန် Air Force One ၇ဲ့ အကြောင်းနဲ့ အိမ်ဖြူတော် သိကောင်းစရာ သိဖို့လိုအပ်
လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ် အမီဆုံးနဲ့အလျို့ဝှက်ဆုံး အကောင်းဆုံးသောလေယာဉ်အဖြစ် အများစုက သတ်မှတ်ထားတာကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ စီးနင်းလိုက်ပါလေ့ရှိတဲ့Air Force One လေယာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာသိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍကို ဦးဆောင်နေတဲ့စူပါပါဝါနိုင် ငံကြီးရဲ့ဦးစီးနင်းတဲ့ယာဉ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်း ပညာရပ်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ တွေ့မြင်နေရတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Air Force One လေယာဉ် အမေရိကန်သမ္မတစီးနင်းတဲ့အထူးလေယာဉ်တစ်ခုအဖြစ်သာမက လေယာဉ် အတွင်း လိုအပ်တဲ့အ၇ာတွေ…
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး မှတ်တမ်း – ​ဆောင်းပါး
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြ ရာတွင် ရွှေတိဂုံဘုရားအလယ်ပစ္စယံညီလာခံသည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်က ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည့် အစည်း အဝေးကြီးများတွင် ပထမဆုံး အကြီးကျယ် အခမ်း အနားဆုံး ညီလာခံကြီးဖြစ်ပေသည်။ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်မှာ ဖက်ဆစ် များအား တော်လှန်တိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ရေးဖြစ်ပြီး ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်မှာ နောင်ထပ်ဝင်လာမည့် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးယူရန်အတွက် နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဆင်နွှဲရန် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးအား စည်းရုံး၍ အသင့်ပြင်ဆင်ထားရေး ပင် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ရေး အတွက် နေသူရိန်ဇာတ်ရုံကြီးတွင်…
သရဲအကောင် ၂၀ ထက်မနည်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက် သရဲတစ်ကောင်နဲ့ စေ့စပ်တော့မယ့် အမျိုးသမီး
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အေမီသစ်ရဲလ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက သရဲအကောင် ၂၀ ထက်မနည်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပြီး သြစတြေးလျကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားခဲ့ချိန်မှာ ၎င်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ သရဲတစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရဲလ်ဟာ ယင်းဝိဥာဉ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခင်တုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ဝိဥာဉ်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝိဥာဉ်က နေရာတစ်ခုတည်းမှာ နေလိုတယ်လို့ ပြောလာခဲ့ပြီးနောက် ယင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မတွေးခဲ့ကြောင်း…
အမေး – ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက်၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။ ကျမတို့ မိန်းကလေး သဘာဝအရ ယောက်ျားလေးနဲ့ စပြီး နေတဲ့နေ့မှာ သွေးကျရမယ်လို့ ကျမအမျိူးသားက ပြောပါတယ်။ ကျမ အဲလိုသွေးမကျဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျမကို အပျို မစစ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သူနဲ့ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုပြီး နေ့စဉ် အဲဒါကိုပဲ ပြဿနာလုပ်နေပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို ကျမသူနဲ့မရခင် ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။…